နိုင်ပွဲကိုယ်စီရခဲ့ကြတဲ့ စပါးနဲ့ယူနိုက်တက် ၊ ဘောလုံးနဲ့ ပြန်ထိတွေ့တဲ့ အဲရစ်ဆင် ၊ ဆားဘောလုံး ရမယ့် လီဝန်ဒေါ့စကီး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
နိုင်ပွဲကိုယ်စီရခဲ့ကြတဲ့ စပါးနဲ့ယူနိုက်တက် ၊ ဘောလုံးနဲ့ ပြန်ထိတွေ့တဲ့ အဲရစ်ဆင် ၊ ဆားဘောလုံး ရမယ့် လီဝန်ဒေါ့စကီး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
December 3, 2021 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၄ ရဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး တို့ နိုင်ပွဲ ကိုယ်စီ ရရှိ ခဲ့ကြပါတယ် ။
စပါး ဟာ ဘရန့်ဖိုဒ့် ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၂ – ၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မန်ယူနိုက်တက် ကတော့ အာဆင်နယ် ကို အိမ်ကွင်းမှာပဲ ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် သူတို့ ၂ သင်းဟာ အဆင့် ၅ နေရာက အာဆင်နယ် ၊ အဆင့် ၄ နေရာက ဝက်စ်ဟမ်း တို့နဲ့ အမှတ်ကွာဟမှု ကျဉ်းမြောင်း လာခဲ့ ကြပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို အိုလေဂန်နာ ဆိုးရှား ဆီကနေ ယာယီ လွှဲပြောင်း တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်ကာရစ် ကတော့ အာဆင်နယ် နဲ့ ပွဲ အပြီးမှာ နည်းပြ ရာထူးကနေ ထွက်ခွာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကာရစ် ဟာ ရပ်ဖ်ရန်းနစ် ရဲ့ နည်းပြ အဖွဲ့ထဲ ကိုလည်း ပါဝင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
မနေ့ညက ပွဲမှာ ယူနိုက်တက် အတွက် ၂ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ရိုနယ်ဒို ကတော့ ကစားသမား ဘဝမှာ ဂိုးပေါင်း ၈၀၀ ပြည့်မြောက် သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒိန်းမတ် ကွင်းလယ်လူ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ဟာ မိခင် နိုင်ငံက အသင်းဟောင်း မှာ တဦးတည်း သီးသန့် လေ့ကျင့်မှုတွေ စတင် လုပ်ဆောင် နေပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အဲရစ်ဆင် ဟာ ဇွန်လ တုန်းက ကစားခဲ့တဲ့ ယူရို ပြိုင်ပွဲမှာ နှလုံးဖောက် ခဲ့တာကြောင့် ကာလရှည် အနားယူ ခဲ့ရပြီး သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် စီးရီးအေ မှာ ဘောလုံး ဆက်ကစားခွင့် ဆုံးရှုံး ခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဂျာမနီ ပြည်တွင်းမှာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှုတွေ ပိုမို မပြင်းထန် လာစေဖို့ အတွက် ကန့်သတ်ချက်တွေ ကို ပြန်လည် တိုးမြှင့် တော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဘွန်ဒစ်လီဂါ ပွဲတွေ မှာ ပရိသတ် ၁၅၀၀၀ ထက် ပိုပြီး ဝင်ရောက်ခွင့် ပြုတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ မန်စီးတီး ရှေ့တန်း ကစားသမားလေး ဖာရန်တောရက်စ် ကို ခေါ်ယူ ရာမှာ အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဆာဂျီယို ဒက်စ် ကို ထည့်သွင်း ကမ်းလှမ်း သွားဖွယ် ရှိတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
အေစီမီလန် တိုက်စစ်မှူးကြီး ဇလာတန် အီဘရာဟီမိုဗစ်ချ် ကတော့ သူဟာ အသင်းဟောင်း PSG ထံ အားကစား ဒါရိုက်တာ အဖြစ် လာရောက် လုပ်ကိုင်မယ်လို့ PSG ဥက္ကဌ အယ်ခါလီဖီ ကို ပြောခဲ့ဖူးကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောဆို ခဲ့သလို အေစီ ကနေ PSG ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားတဲ့ ဂိုးသမား ဒွန်နာရမ်မာ ဟာ ပြင်သစ် ကလပ် မှာ နံပါတ် ၁ နေရာ နဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်းလည်း ထောက်ခံ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် လီဂူးဝမ်း နဲ့ ရုပ်သံလွှင့် အဖွဲ့ Mediapro တို့ စာချုပ် ထပ်မံ မချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့တာဟာ PSG အသင်းကို ဝင်ငွေ ယူရို သန်း ၁၂၀ လောက် ဆုံးရှုံး သွားစေ ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ရလဒ်တွေ ဆိုးရွား နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေလင့် ကစား အဲဗာတန် အသင်း ပိုင်ရှင် မိုရှီရီ ကတော့ နည်းပြ ရာဖေး ဘင်နီတက် ကို ထောက်ခံ အားပေး နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘရာဇီး ကလပ် ဖလာမင်ဂို မှာ ကစားနေပြီး ၈၆ ပွဲမှာ ဂိုး ၆၀ အထိ သွင်းယူ ထားတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဂါဘရီရယ် ဘာဘိုဆာ ရဲ့ အေးဂျင့် ဖြစ်သူကတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ် ၊ နယူးကာဆယ် တို့နဲ့ သတင်း ထွက်ပေါ် နေမှုတွေ ဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဘုတ်အဖွဲ့ဟာ နည်းပြသစ် ဇာဗီ ကို လာမယ့် ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ကစားသမားသစ် ၃ ဦး အထိ ခေါ်ယူဖို့ ခွင့်ပြု သွားမယ်လို့လည်း သတင်း ရရှိပါတယ် ။
လီဝန်ဒေါ့စကီး ရဲ့ မွေးရပ် ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ ပိုလန် နိုင်ငံက Wieliczka မြို့ဟာ နှစ်သစ်ကူး ကာလမှာ အိမ်ပြန်လာမယ့် တိုက်စစ်မှူးကြီး ကို ဆား နဲ့ ပြုလုပ် ထားတဲ့ Ballon D’or ပုံစံတူကို လက်ဆောင်ပေးသွားဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ပိုလန်သားတွေ ဟာ ဒီနှစ် လီဝန်ဒေါ့စကီး ရွှေဘောလုံးဆု မရရှိခဲ့မှု အပေါ် တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ဖြစ်ရပ်လို့ ယူဆ ထားကြောင်းလည်း အဆိုပါ မြို့တော် ကောင်စီဝင် က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article ကာရစ် အနိုင်နဲ့ ပိုင်းသွားခဲ့တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် ၃-၂ အာဆင်နယ် ပွဲမှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက် ၆ ချက်
Next Article ရလဒ်ကောင်းတွေ ယူပေးခဲ့ပြီးနောက် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ ကာရစ်